Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.2.4 kukukurwa
Population vasakukurwa, mashandisirwo vasakukurwa uye gadziriro vasakukurwa kuti zvakaoma kushandisa guru date panobva kudzidza kwenguva refu kuitika.
Chimwe zvakanakira zvikuru zvakawanda guru mashoko manyuko vari kuti kuunganidza mashoko pamusoro nguva. Masayendisiti Social dana anopfuura-nguva data, longitudinal Data kwakadai. Uye, sezvingatarisirwa, longitudinal Data zvinokosha chaizvo kuti kudzidza shanduko. Kuti yakavimbika ayere shanduko Zvisinei, nokuyerwa hurongwa pachayo inofanira kuva yakatsiga. Mumashoko nyanzvi Otis Dudley Duncan, "kana muchida kuyera shanduko handishanduki nechiyero" (Fischer 2011) .
Zvinosuruvarisa zhinji huru mashoko gadziriro-kunyanya mubhizimisi hurongwa kuti asike uye andobata digitaalinen zvisaririra-vari kuchinja nguva dzose, mumwe muitiro kuti Ndicharipira vasakukurwa. Kunyanya, izvi hurongwa zvakachinja huru nenzira nhatu: yevagari vasakukurwa (kuchinja ari kuvashandisa), zvounhu vasakukurwa (kuchinja sei vanhu vari kuvashandisa), uye hurongwa vasakukurwa (shanduko mumamiriro ezvinhu pachayo). The zvitatu manyuko vasakukurwa kunoreva kuti chero muenzaniso digitaalinen zvisaririra Data yaigona kukonzerwa kuchinja kunokosha munyika, kana zvaigona kukonzerwa rwakati vasakukurwa.
Panobva chokutanga vasakukurwa-vakawanda vasakukurwa-ari iye ari kushandisa hurongwa, uye ichi anochinja pamusoro-refu nguva chikero uye pfupi-nguva pachikero. Somuenzaniso, kubva muna 2008 kupa avhareji yezera vanhu pamusoro evanhu vezvenhau yawedzera. Kuwedzera kune izvi kwenguva refu yokurera, vanhu uchishandisa hurongwa chero nguva-siyana. Somuenzaniso, panguva US Presidential sarudzo cha2012 kuwanda Tweets pamusoro zvematongerwo enyika kuti zvakanyorwa nevakadzi-chinja nokufamba kubva zuva nezuva (Diaz et al. 2016) . Saka, chii kuti aratidzike nokuchinja mafungiro ari Twitter-ndima kuti chaizvoizvo kungova kuchinja ari kutaura chero nguva.
Kuwedzera nokuchinja ndiani ari kushandisa hurongwa, panewo muupenyu sei wegadziriro inoshandiswa. Somuenzaniso, panguva Anopamba Gezi Park Kuratidzira muna Istanbul, Turkey muna 2013 vairatidzira vakachinja kushandisa kwavo hashtags sezvo ratidziro kumhuka. Heano mazano Zeynep Tufekci (2014) akarondedzera vasakukurwa, iro akakwanisa kuona nokuti akanga kucherechedza unhu musi Twitter uye pasi:
"Chii chakanga chaitika chaiva kuti paakangoridza ratidziro yakava nyaya unonyanyoshandiswa, nhamba huru yevanhu. . . vakarega kushandisa hashtags kunze anokwezvera kutanga zvitsva. . .. Apo Kuratidzira kwakapfuurira, uye kunyange yakawedzera, ivo hashtags ikanyarara. Kubvunzurudza yakaratidza zvikonzero zviviri izvi. Chokutanga, kamwe wose aiziva nyaya, iyo hashtag akanga kamwechete okushamisira uye pfachura pamusoro hunhu-shoma Twitter papuratifomu. Chechipiri, hashtags kuonekwa chete sezvo chinobatsira kuti yokukwezva nzeve imwe nyaya, kwete nokuti kutaura nezvazvo. "
Saka, vatsvakurudzi vaidzidza okutsutsumwa nokuongorora Tweets vane dzabhadhara-chokuita hashtags vaizova maonero zvakanga zvichiitika nokuti ichi zvounhu vasakukurwa. Somuenzaniso, vatende kuti kukurukurwa mukupokana kunoderedza refu usati chaizvoizvo akaramba achidzikira.
The pamusoro vasakukurwa kwechitatu kunova hurongwa vasakukurwa. Panyaya iyi, hachisi vanhu kuchinja kana ravo maitiro kuchinja, asi maitiro pachayo kuchinja. Somuenzaniso, pamusoro nguva Facebook yakawedzera pokupedzisira riri nokureba chinzvimbo inogadziridza. Saka, chero longitudinal kudzidza chinzvimbo inogadziridza zvichava nyore kuti zvinhu zvaishandiswa anokonzerwa nokuchinja uku. System vasakukurwa ine chokuita dambudziko inonzi algorithmic akakunda uko kwatinotarira ikozvino.